सिल्टल सामग्री मार्केटिंग सुझावहरू प्रत्येक व्यवसायको लागि उपयोगी
इन्टर्नेट इन्टरप्राइभर्सर, मार्केटर्स, ब्लगरहरू, विज्ञापकहरू र इन्टरनेटहरूसँग अतिभार गरिएको छती सबै तपाईंको ध्यानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सामग्रीको मात्राको रूपमानिरन्तर बढ्दै गएको छ, त्यहाँ देखा पर्ने कम गुणस्तरको सामग्री होप्रत्येक दिन। "Hype" यसलाई अपग्रेड गर्न र कम प्राप्त सामग्री कम गर्न एक प्रवृत्ति छसुचित। यद्यपि, कुनै पनि व्यवसायको लागि जो दीर्घकालीन वृद्धिमा लक्ष्य राख्छ,यो उच्च गुणवत्ताको सामग्रीसँग प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले सामग्री आफैलाई उत्पादको रूपमा बजारमा राख्नुपर्छ। जूलिया वशिनावा, प्रमुखविशेषज्ञ सेल्टल्ट डिजिटल सेवाहरू, कुन सामग्रीको मार्केटिंग रणनीतिहरू बताउनुपर्छहरेक कम्पनीले रोजगारीको लागी कार्यरत हुनुहोस्।
यो उच्च गुणस्तरको सामग्री सिर्जना गर्न सुरु हुन्छ। यदि तपाईं अनलाइन काम गर्नुहुन्छ भने, सामग्री मार्केटिंगतिम्रो व्यवसाय हुनु पर्छ। यो मार्केट आक तपाईं कुन हुनुहुन्न भन्ने कुरामा पर्दैन,तपाईं बेच्दै हुनुहुन्छ, र तपाईको मूल्य बिन्दु के हो? तपाईं आफैलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकातपाईंको व्यवसायको छवि, ब्रान्ड प्रतिष्ठा, र दर्शकहरूको वफादारी परिभाषित गर्नुहोस्। अनलाइनको रूपमाउद्यमी, तपाईले आफ्ना दर्शकहरूलाई सान्दर्भिक, सोच्न उत्प्रेरक जानकारी प्रदान गर्नुपर्दछ।
प्रेरणात्मक विज्ञापनको निरन्तर दबाबमा तपाईंको ग्राहकहरू राख्नुको सट्टा,मानिसहरूलाई जागरूक निर्णय गर्न उनीहरूको सहयोग गर्न सिकाउन प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई जस्तै महसुस गर्नुहोस्बुद्धिमान, विचारशील खरीदारहरू र लगानीकर्ताहरू छन्, र तपाईले निश्चित रूपमा बिक्री बढाउनुहुनेछ।विश्वसनीय र जानकारीपूर्ण सामग्रीहरू लगातार निरन्तरता राख्नुहोस्। यसरी, तपाईं विश्वसनीयता प्राप्त गर्नुहुनेछतपाईंको चुने बजार मार्केट मा। जब तपाईं उत्पादन र जानकारीको विश्वसनीय स्रोत हुनुहुन्छ,तपाईंको सिफारिसहरू लाभ बढ्दै गएको छ।
लामो समयको व्यवसाय निर्माणको लागि दर्शकसँग कुराकानी आवश्यक छ। तपाईंको सामग्रीतपाईंको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन कुनै उद्यमी, ब्लगर वा बजारको लागि मुख्य उपकरण हो।जब तपाईंसँग केहि कुरा महत्त्वपूर्ण छ भने, तपाइँले यसलाई निश्चित रूपमा सुन्नु पर्छ। निर्णय गर्नुहोस्तपाईंको विचार अनुवाद गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी च्यानल।
यसलाई 140 क्यारेक्टर वा कममा भनिएको छ? यो tweeting प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईंलाई लाग्छ कि यो एक ब्लग हुन सक्छपोस्ट? यसलाई तपाइँको साइटमा राख्नुहोस्, अरूको ब्लगमा, तपाईंको श्रोतालाई न्यूजलेटर सिर्जना गर्नुहोस् वाप्रकाशनको लागि एक पत्रिकामा पठाउनुहोस्। तपाईंको सामाग्री वितरण गर्न दर्जनौं तरिकाहरू छन्।तपाईंसँग कुरा गर्ने बारे सोच्नुहोस्। के यो YouTube अनुकूल दर्शकहरू हो? वा, सम्भव छन्यूजलेटर राम्रो हुनेछ? सम्झनुहोस्, यो संचार गर्नको लागि सबै भन्दा राम्ररी तरिका होतपाईंको संभावित ग्राहक वा पाठकहरूका साथ।
निर्माण आवश्यक सम्बन्ध
यदि तपाईंले सार्वजनिक बोल्दै, प्रस्तुतीकरण, वा सामग्री मार्केटिंग मा भर्खरै पाठ्यक्रम पार्यो भने,त्यसपछि तपाईंले पहिले नै यो सुनेको छ। अझै पनि, यो पर्याप्त भन्न सकिँदैन। आफ्ना श्रोताहरूलाई थाहा छ।तपाईंलेसँग बनाउनु भएको सम्बन्ध भन्दा तपाईंको व्यवसायलाई अझ आवश्यक हुन सक्छतपाईंका अनुयायीहरू? तिनीहरूलाई जान्न पाउनुहोस्। थाहा छ तिनीहरू को हुन्, तिनीहरूले के चाहन्छन्, र उनीहरूको केआवश्यक छ। उनीहरु संगै सम्बन्ध राख्ने हरेक दिन तिनीहरुसँग कुराकानी गर्नुहोस्।
सामग्रीको सामाग्रीमा काम गर्नुहोस् र पाठकको लागि यसको मूल्य बढाउनुहोस्। तिमीलेनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले साझा गर्नुभएको सामग्री अन्ततः उपयोगी छ। आफैलाई राख्नुहोस्तपाईंको ग्राहकहरु को जूता। के तपाइँ केही पढ्न चाहानुहुन्छ गैर-जरूरी पढ्न चाहानुहुन्छ?खैर, कसैले पनि यो मन परेन। तर जब तपाइँ महत्त्वपूर्ण विचारहरू र रोचक बनाउन सक्नुहुन्छतपाईका श्रोताहरूलाई जानकारी, उनीहरूले कृतज्ञतापूर्वक तपाईंलाई इनाम दिनेछन्।
दर्शकलाई संलग्न गर्नुहोस्
आफ्नो दिमागलाई निशुल्क र तपाईंको सामग्रीमा फरक स्वर्गदूतलाई हेर्नुहोस्। रचनात्मक रबक्स बाहिर सोच्दै तपाईका श्रोताहरु संग एक मजबूत सम्बन्ध स्थापित गर्दछ। यसबाहेक,तिनीहरूलाई थाहा छ। तपाईंको नाम, तपाईंको तस्विर र मिनी-बायो त्यहाँ साथ राख्नुहोस्तपाईंको सामग्री। ढोका खोल्नुहोस् र मान्छे दिनुहोस्। जब मान्छे तपाईं संग एक साथव्यक्ति, उनीहरूले के भन्नु पर्ने कुरा सुन्न बढी सम्भव छन्।
निस्सन्देह, यी सबै प्रथाहरू तपाईंको सामग्री मार्केटिंग रणनीतिको समयको रूपमा बृद्धि गर्दछजान्छ। तपाईंले यी उद्योगहरूलाई नेताको रूपमा निरन्तर रूपमा यी विचारहरू पछ्याउनु पर्छ।सबै क्लाइन्ट्स (3 9) सेल्टल्ट थाहा छ कि सामग्रीको गुण एक दीर्घकालिक लगानी होजसले तपाईंलाई ठूलो इनाम दिन्छ। तपाईंको भ्वाईस तपाईंको अग्रणी उत्पादन हुन्छ।
. Source - sigelei 100 watt box mod v3